Tsara sy Eo Ho Eo ihany, Izay Niova Tao Rosia Ny 1 Janoary 2017 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2017 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, English, Español, македонски, Shqip, English
Loharano: Renate Dodell, Flickr.
Isantaona, mandany lalàna novolavolaina ho ampiharina manomboka ny 1 Janoary ny Douma-mpanjakàna rosiana. Ny 2017, toy ny efa mahazatra, toa hitondra fanatsaràna ho an'ny fiarahamonina rosiana ny sasantsasany amin'ireny lalàna ireny, ary ho an'ny hafa kosa….eo ho eo ihany. Ho an'ilay noketrehina ho an'ny taona 2017, notsongain'ny RuNet ny tsara sy ny ratsy, amin'ny fametrahana ireo fanapahankevitry ny fitsaràna hametraka ny asa an-terivozona any amin'ireo toeram-pigadràna sasany.
Ny ‘hetra Google’
Manomboka ny 1 Janoary, tsy maintsy mandoa hetra ao Rosia amin'ny tombony azony ny sasany amin'ireo orinasa vahiny mampihatra ny varotra an-tserasera (e-commerce). Koa satria ilay lalàna dia mahakasika ireoorinasa mivarotra boky elektronika, mozika, sarimihetsika sy rindrambaiko informatika, dia efa manana anaram-petaka sahady ilay izy : ny hetra Google. Vokatr'izay, notataovan'ny Google 18 % ny saran'ireo tolotra Google Drive sy ireo fividianana atao amin'ny alàlan'ny Google Play.
Rejisitra ho an'ireo manana kilema sy mitondra otrikaretina sida
Ny 1 Janoary no hanamarika ihany koa ny fametrahana rejistra iray ho an'ireo Rosiana mitondra ny otrikaretina VIH. Manamarina ny famoronana io rejistra io ny Minisitra rosiana misahana ny Fahasalamàna, amin'ny filazana ny fahafantarana tsara kokoa ny endrikendriky—ny fianahany—ny olàn'ny VIH ao amin'ny firenena : olona maherin'ny 1,5 tapitrisa, izany hoe mihoatra ny 1 isanjaton'ny mponina rosiana, no voatily ho mitondra ny otrikaretina na mararin'ny SIDA. Tany am-piandohan'ny taona, nanambara ny manampahefana rosiana fa i Iekaterinbourg, tanàna fahefatra lehibe indrindra ao Rosia, any amin'ny Oural, no nahitàna ny valanaretina VIH. Maherin'ny 1,8 % amin'ireo 1,4 tapitrisa mponina ao no mitondra ilay viriosy.
Amin'izao fotoana aloha, antsitrapo ny fisoratana ao anatin'ilay rejistra, na natao ho toy ny angondrakitra ho an'ny famatsiana fitsaboana/fanafody “antirétroviraux” ao amin'ny firenena aza ilay lisitra.
Manomboka ny andro voalohany amin'ny taona, ny Tahiry rosiana ho an'ny Fisotroandronono dia hametraka ihany koa rejisitra iray hisy ireo olna sembana. Antenain'ireo tomponandraiki-panjakana araka izany ny hanampy ireny olona ireny hahita asa, hampahafantatra ireo vola fanome sy fandaharanasa izay ananan'ireo olona sembana zo. Amin'ny firenena rehetra, i Rosia no manana ny iray amin'ireo elanelana goavana indrindra eo amin'ny asa sahanin'ny sembana sy ny tsy sembana, araka ny fanadihadiana iray vao haingana nataon'ny “Organisation Internationale du Travail (OIT)”.
Rosiana maherin'ny 12 tapitrisa, izany hoe manakaiky ny 9 % -n'ny vahoaka, no miaina miaraka aminà fahasembanana, ankizy ny 620.000 amin'ireo.
Fitsipika vaovao ho an'ireo mpamory/mpanangona vaovao ho aminà toerana iray
Hitondra fitsipika vaovao vitsivitsy ihany koa ny taona vaovao ho an'ireo mpamory/mpanangona vaovao ho aminà toerana iray ao Rosia. Ireo izay manana fitsidihana mihoatra ny 1 tapitrisa isanandro dia horaisina ho toy ny sampana mpampahalàla vaovao eo imason'ny mpitantana rosiana, ka dia tsy maintsy manamarina ny fahamarinan'izay lahatsoratra sy vaovao averiny avoaka—asa iray azo lazaina tsy ho vita, izay hanome vahana ireo mpiasam-panjakana hamely ireo tranonkalam-baovao malaza ao amin'ny firenena ary manana loharano maro, toy ny Yandex, Mail.ru, Google sy Bing. Nokirain'ny RuNet Echo tamin'ny antsipirihany ny fampidirana io lalàna io sy ireo tsindry avy amin'ny fanjakàna (hatramin'ny fihemorana – rétropédalage) manjo ny Google.
Manomboka ny andro voalohan'ny taona, hahazo alàlana ireo tribonaly rosiana hanameloka ireo voampanga mba hanao asa an-terivozona any amin'ny toeram-pigadràna manerana ny firenena. Fonja lehibe efatra no hanokatra ny varavarany manomboka ny 1 Janoary: any Siberia ao Tioumen, any amin'ny faitr'i Tambov (atsimo atsinanan'i Maosko), any Kraï Stavropol (Kaokazy Avaratra), ary ny an'i Primorié (Tendrony Atsinanana), hanampy ireo fonja madinika maro manerana ny firenena. Hanana fepetram-piarovana tsy mitovy amin'ireo fonja tsotra mahazatra izy ireny, ary ho afaka hahazo fanomezandàlana hivoaka avy amin'ireo tale ireo mpifonja. Fa kosa, tsy afaka mifidy na manova izay asa nomena azy.
Taorian'ny nandaniana ilay lalàna, nanamafy i Valeri Maximenko, talen'ny sampan-draharaha federaly misahana ny fonja, hoe ny asa an-terivozona dia fivoarana mihara amin'ireo karazana sazy hafa, satria tsy ho voahilikilika lavitry ny fiarahamonina ireo mpifonja : “Na eo aza ny fomba fiantso azy, ny asa an-terivozona any amin'ireo toeram-panonjàna dia azo ampitahaina amin'ny asa itambarambe ataon'ireo olona lavitry ny tokantranony ary miaina anaty efitrano fatoriana iraisana”.
Tsy dia haharesy lahatra loatra ireo manana fahatsiarovana ratsy momba ny Goulag anefa ny toky nomen'Ing Maximenko, raha ny endriky ny asa efa misy amin'izao fotoana izao any anatin'ireo toeram-pigadràna ankehitriny ao Rosia.
Tamin'ny 23011 no natsofoka ny asa an-terivozona h oao anatin'ny fehezam-pamaizan'ny Ady Heloka any Rosia, saingy imbetsaka nahemotra ny fampiharana azy hatrizay.
Fitsarana natsofoka ho ety anaty serasera
Hametraka ny tribnaly ho ety anaty aterineto ihany koa ilay lalànan'ny Taona Vaovao—farafaharatsiny ny sasantsasany amin'izy rehetra. Eken'ireo tribonaly ao an-tanàna sy distrikan'i Maosko manomboka izao ny fametrahana fitoriana, fandravana didy ary ireo karazana antontan-taratasy hafa amin'ny endrin elektrnika, ary ireo sanda fandoa amin'ny fitsaràna dia azo jerena amin'ny alàlan'ny anarany isan-tsokajy, hitsivolana na fomba hafa maro. Ireo tribonaly manana ny fahafahana ara-teknika hanatanteraka io famadihana ho dika elektronika io irery ihany no hanao izany, raha lazaina amin'ny fomba hafa, tsy hanana tranonkala aterineto mitovy amin'ny an'ny rantsam-pitsaràna maoskovita, efa amperinasa, ny ankamaroan'ireo trbonaly rosiana. Rehefa atambatra, naharitra taonaroa ny famadihana ho dika elektronika nataon'i Maosko, nanomboka tany amin'ny famolavolàna azy mba ho azo ampiharina, nosandaina 172,4 tapitrisa dolara, ka ny 50 avy amin'ny Banky Iraisampirenena ho an'ny Fanarenana sy ny Fampandrosoana.
Fampitomboana ny taona handehanana misotro ronona ho an'ireo mpiasam-panjakana.
Talohan'ny taona vaovao, ny taona hitsaharana sy handehanana misotro ronono ho an'ireo mpiasam-panjakana sy mpiasan'ny kaominina rosiana dia 55 ho an'ny vehivavy ary 60 ho an'ny lehilahy. Manomboka ny 1 Janoary, hiova miandàlana io, 63 ho an'ny vehivavy ary 65 ho an'ny lehilahy, izany hoe hiampy volana enina isanaona (ho tonga ahatrany amin'ny 2032 ny fametrahana azy ho an'ny vehivavy ary 2026 to an'ny lehilahy). Manamafy ny fanjakana fa natao hitazonana ela ireo mpiasampanjakana manana traikefa ho eo amin'ny toerany ilay fepetra, ary hampihenàna ny vesatry ny vola aloa amin'ny fisotroandronono zakain'ny kitapombola federaly.
Tataon-ketra avo be ho an'ny alikaola sy ny sigara
Farany, manomboka ny 1 Janoary, ireo rosiana mpisotro alikaola dia handoa tataon-ketra avo be amin'ny labiera, divay, “cidre”, sy “medovukha” (karazana hydromel) sy ireo alikaola mahery. Hiampy 10 robla ka hahatratra 36 isaky ny litatra ny tataon-ketra alaina amin'ny “champaigne” nafarana avy any ivelany, ary 1 robla ho an'ny divay misy roatra novokarina eo an-toerana, hatramin'ny 14 robla isaky ny litatra. Tsy hihetsika ny fakàna hetra amin'ny divay rosiana, raha hitombo 9 robla hatramin'ny 18 robla kosa ny an'ireo divay avy any ivelany. Ato anatin'ny taona telo ho avy, hiakatra ihany koa ny tataon-ketra alaina amin'ireo sigara sy “e-sigara” (sigara eletronika).